PVC Pipe Extrusion Mutsetse - Qiangsheng Plastic Machinery co., Ltd.
PP Pe PVC chete rusvingo chemarata mutopota extrusion ...
PPR pombi extrusion mutsetse
Pe nyere extrusion mutsetse
PVC pombi extrusion mutsara
Hwakagadzwa muna 2000, Zhangjiagang City Qiangsheng Plastic Machinery co., Ltd ari nyanzvi akaigadzira epurasitiki michina. Inowanikwa muna 78 Baixiong Road, Sanxing, Jinfeng Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China. tinonakidzwa nyore kutakura. Kambani yedu inobata nzvimbo ye8,000 m2 uye ine zvivakwa zvemberi zve-screw-extruder, imwechete-screw extruder, seti yematsetse ekugadzira emitsara uye zvigadzirwa zvekubatsira.
Tine rezinesi rekutengesa kunze kwenyika, isu tinotengesa zvigadzirwa kumatunhu makumi maviri nemapfumbamwe, maguta nenzvimbo dzakazvimiririra uye zvinotumirwa kuRussia, Africa, Middle kumabvazuva uye Southeast Asia.Zvigadzirwa zvedu zvinowana kurumbidzwa kwakakura kumba nekune dzimwe nyika. Yakaomesesa mhando kutonga kunoitwa mune yega maitiro kubva pane zvekushandisa, kugadzirisa uye kuyedza kurongedza.
Chigadzirwa Kuunzwa kwePolypropylene (PP-R) Mapaipi eMvura Inotonhora uye Inotonhora
PP-R mapaipi uye zvigadzirwa zvakavakirwa pane yakasarudzika copolymerized polypropylene seyakanyanya mbishi zvinhu uye inogadzirwa zvinoenderana GB / T18742. Polypropylene inogona kukamurwa kuita PP-H (homopolymer polypropylene), PP-B (block copolymer polypropylene), uye PP-R (zvisina kujairika copolymer polypropylene). Double pamadziro chemarata mutopota muchina unoita basa rakakosha mukugadzira pombi. PP-R inyaya yesarudzo yepolypropylene mapaipi emvura inopisa uye inotonhorera nekuda kwekumirisana kwayo kwenguva refu nehydrostatic kumanikidza, kwenguva refu kupisa-kusagadzikana okisijeni kuchembera nekugadzirisa uye kuumba.
Kushandiswa Kwe PE Pipe
1. PE yekuchera pombi Pakati peinjiniya mapurasitiki ese, HDPE ine yakanyanya kupfeka kuramba uye ndiyo inonyanya kuoneka. Iyo yakakwira iyo mamorekuru uremu ...
Zvakanakira PVC Zvikwepa
Pombi dzePVC dzinotora pombi dzePVC-U dzemadhiraini, ayo akagadzirwa ne polyvinyl chloride resin seyakanyanya mbishi zvinhu Ivo vanowedzerwa neakafanira additi ...